2020 အတှကျ အကောငျးဆုံး ကစားသမားက ဖာနနျဒကျဈလား?
ယူနိုကျတကျရဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား ဖာနနျဒကျဈဟာ ဒီရကျပိုငျးမှာ ဆုတံဆိပျတှရေရှိနပေါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ တဈလတာအကောငျးဆုံးဂိုးသှငျးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဗာတနျနှငျ့ပှဲက သှငျးယူခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးနဲ့ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဖာနနျဒကျဈ ဟာ FSA က ရှေးခယျြ ခြီးမွှငျ့တဲ့ 2020 တဈနှဈတာရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုကို လညျး ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။FSAဆိုတာက Football Supporters’ Association(ဘောလုံးပရိတျသတျမြား အဖှဲ့အစညျး) ဖွဈပွီး အင်ျဂလနျ ၊ ဝေးလျ စတဲ့ UK အခွစေိုကျ ပရိတျသတျ ၅သိနျးကြျောနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ ဖွဈပါတယျ။
ကစားသမားတှအေတှကျ ဆုကို 2013ခုနှဈကတညျးက စတငျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့ပွီး အဲဒီတုနျးက လီဗာပူး အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူး ဆှာရကျဇျက စတငျ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ 2014မှာ မနျစီးတီး တိုကျစဈမှူး အဂူရို၊ 2015ခုနှဈမှာ အာဆငျနယျတိုကျစဈကစားသမား ဆနျးခကျြတို့ဖွဈပါတယျ။ 2016မှာတော့ လီဗာပူး ကှငျးလယျလူ ကျောတငျဟို၊ 2017 မှာ စပါး တိုကျစဈမှူး ဟယျရီကိနျး၊ 2018မှာ လီဗာပူး တိုကျစဈမှူးဆာလကျ နဲ့ 2019မှာ လီဗာပူးကစားသမား ဗနျဒိုကျ တို့ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ကှငျးလယျလူ ဖာနနျဒကျဈဟာ အစေီမီလနျနှငျ့ပှဲတှငျ ဖနျတီးမှုတဈကွိမျစှမျးဆောငျပွီးနောကျ ယူနိုကျတကျ အတှကျယခုနှဈဘောလုံးရာသီတှငျ (42)ပှဲပါဝငျကစား ကာ (23)ဂိုးသှငျးယူပွီး (13)ဂိုးဖနျတီးထားကွောငျးသိရ ပါတယျ။ အစေီမီလနျပှဲစဉျက ကှငျးလယျလူ ဖာနနျဒကျဈရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှကေတော့ ဘောလုံးပေးပို့ရာ၌တိကမြှု%-(85%)၊ အခှငျ့အရေးဖနျတီးပေးမှု-(2)ကွိမျ၊ ပွဈဒဏျကြူးလှနျခံရမှု-(2)ကွိမျ၊ ဂိုးဖနျတီးပေးမှု -(1)ကွိမျ တို့ဖွဈပါတယျ။
2020 အတွက် အကောင်းဆုံး ကစားသမားက ဖာနန်ဒက်စ်လား?
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဆုတံဆိပ်​တွေရရှိ​နေပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်လတာအကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဗာတန်နှင့်ပွဲက သွင်းယူခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖာနန်ဒက်စ် ဟာ FSA က ရွေးချယ် ချီးမြှင့်တဲ့ 2020 တစ်နှစ်တာရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို လည်း ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။FSA ဆိုတာက Football Supporters’ Association (ဘောလုံးပရိတ်သတ်များ အဖွဲ့အစည်း) ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် ၊ ဝေးလ် စတဲ့ UK အခြေစိုက် ပရိတ်သတ် ၅သိန်းကျော်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသမားတွေအတွက် ဆုကို 2013ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး အဲဒီတုန်းက လီဗာပူး အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ်က စတင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် 2014မှာ မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး အဂူရို၊ 2015ခုနှစ်မှာ အာဆင်နယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဆန်းချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ 2016 မှာတော့ လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ ​ကော်တင်ဟို၊ 2017 မှာ စပါး တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်း၊ 2018မှာ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူးဆာလက် နဲ့ 2019မှာ လီဗာပူးကစားသမား ဗန်ဒိုက် တို့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ အေစီမီလန်နှင့်ပွဲတွင် ဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်စွမ်းဆောင်ပြီးနောက် ယူနိုက်တက် အတွက်ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီတွင် (42)ပွဲပါဝင်ကစား ကာ (23)ဂိုးသွင်းယူပြီး (13)ဂိုးဖန်တီးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အေစီမီလန်ပွဲစဉ်က ကွင်းလယ်လူ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်​တွေက​တော့ ဘောလုံးပေးပို့ရာ၌တိကျမှု%-(85%)၊ အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးမှု-(2)ကြိမ်၊ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခံရမှု-(2)ကြိမ်၊ ဂိုးဖန်တီးပေးမှု -(1)ကြိမ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။